Ra iisal wasare hore oo fashilka shirka Dusha ka saaray Farmaajo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra iisal wasare hore oo fashilka shirka Dusha ka saaray Farmaajo
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake , ayaa ka hadlay shirkii fashilka kusoo dhamaaday ee teendhada Afisiyooni ku yeesheen madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada.
Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in si kutalo gal ah loo fashiliyay shirkii u socday madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxa uuna tilmaamay in ujeedka laga leeyahay fashilinta shirkaasi uu yahay in la sameeyo mudo kordhin.
“Ujeedada laga leeyahay in la carqaladeeyo wadahadalada su ay u burburaan waa kordhinta waqtiga hay’adaha dowladda, iyada oo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo taageeraya, waxayna kaliya halis ugu jirtaa inay keento xasillooni darro iyo kala qaybsanaan ” ayuu Cumar Cabdirashiid.
Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaana ku baaqay in hogaamiyaasha dalka gaar ahaan kuwa Dowlada federaalka hogaamiya lagula xisaabtamo xaalada cakiran ee dalka ka jirta gaar ahaan khilaafka dooarshada ka taagn.
Previous articleFarmaajo labo bilood ayuu sharci daro ku dhex fadhiyaa Villa Soomaaliya. Labo mid ayuuna ku dambeyn doonaa
Next articleAustaria waxaa ka socda wada hadalo u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka oo lagu doonayo in lagusoo nooleeyo wada hadalada heshiiskii dowladda Iran
⁰Raiisel wasaaraha Australia wuxuu raali galin ka bixiyay shaqaalihii hore ee la sheegay in lagu kufsaday xafiiska baarlamaanka Raiisel wasaaraha Australia Scott Morrison wuxuu kaqeyb...
Weerar lagu laayay arday Bas saarneed oo ka dhacay gobolka Tigray..